Ogologo oge ole ka Cialis 20mg ga-arụ ọrụ? | AASraw
/blog/Cialis , tadalafil/Ogologo oge ole ka Cialis 20mg ga-arụ ọrụ?
Ihe na 10 / 12 / 2017 by Dr. Patrick Young dere na Cialis, tadalafil. O nwere 1 Comment.
bụ aha ahia maka ọgwụ a na-akpọ . Cialis bụ otu n'ime ọgwụ ndị a maara dị ka PDE-5 (ndị na-eme ihe na-eme ka ụdị phosphodiesterase type 5). Cialis na ndị ọzọ na-emepụta PDE-5 nwere ike inyere ndị ikom aka na-enweghị ntụpọ (nwoke na-enweghị ntụpọ) site na ịkwalite mmeghachi omume erectile mgbe nwoke na-akpali agụụ mmekọahụ. E wezụga Cialis, ọgwụ ndị ọzọ dị na klas a bụ (Sildenafil) na Levitra (Vardenafil).
Kedu ka Cialis raw ntụ ntụ si arụ ọrụ?
Cialis raw ntụ ntụ adịghị eme ka mmadụ nwee mmekọahụ. Cialis raw ntụ ntụ ga-adị irè ma ọ bụrụ na nwoke na-enwe mmetụta nke mmekọahụ. Iji ghọta otú Cialis raw ntụ ntụ na-arụ ọrụ ọ dị gị mkpa iji ghọta usoro nke otu nwoke si enweta ụlọ ere. Mgbe mmadụ na-akpali agụụ mmekọahụ, usoro ahụ ụjọ na anụ ahụ erectile nke amụ gị na-enye nitric oxide (NO). The nitric oxide na-akpali enzyme nke na-emepụta 'onye ozi' a na-akpọ guanosine monophosphate (cGMP). CGMP na-atụgharị sel ndị nwere ahụ ike.
Otu nsonaazụ nke a bụ na akwara ndị dị na penis dilatara na ọbara ahụ nwere ike ịba n'ime ya karịa ngwa ngwa. Ihe ọzọ bụ na anụ ahụ erectile jupụtara n'ọbara. Usoro abụọ ndị a na-eme ka e wuo ya. Cialis na-arụ ọrụ site na ịnọgide na-enwe ọkwa nke cGMP na sel dị nro. Ọ bụrụ na ị naghị eche echiche gbasara mmekọahụ, ụbụrụ gị agaghị akwalite ịhapụ nitric oxide na ị gaghị emepụta ọkwa cGMP.
Kedu ngwa ngwa ọ na-arụ?
N'ikpeazụ, Cialis na-arụ ọrụ n'ime oge ahụ ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị ikom kọrọ na Cialis na-arụ ọrụ kachasị mma mgbe awa ole na ole gasịrị. Cialis nwere ike ịnọgide na-arụ ọrụ ruo oge 36. Nke a apụtaghị na ụlọ ahụ ga - adịru ogologo oge - nanị na ị ga - enwe ike ịchọta ụlọ nrụpụtara maka oge ahụ. N'adịghị ka Viagra, nri agaghị egbu oge Cialis.
Kedu ụdị ọgwụgwọ ndị ọzọ na-adị?
Ndị ọzọ ọgwụ, na Levitra rụọ ọrụ n'ụzọ yiri nke a. Cialis nwere ogologo ndụ karịa ogologo oge karịa Levitra na Viagra ma ya mere mmetụta ya dị ogologo. Nke a apụtaghị na nwoke ga-enwe ogologo oge ere ma ogologo oge dị maka ihe ndị ọzọ n'ihu ọganihu abawanyela ma ọ bụrụ na ọ dịghị mkpa ka ọ gakwuo usoro. Ọ pụtakwara na mmetụta ndị dị na ya ma ọ bụrụ na ọ ga-adịru ogologo oge. Cialis, dị ka Levitra, nwere ike iri na nri ma Viagra kwesịrị iwe na afo efu.
Tags: zụta Cialis ntụ ntụ, ịzụta tadalafil uzuzu, cialis ntụ ntụ, tadalafil uzuzu, tadalafil ntụ ntụ soplaya
Enwere ike ịdapụtụ na nke abụọ. A na-ahụkarị nke mbụ (mmebi ahụ) na nwoke enwebeghị mmekọahụ. Nke a dị oke obere. Ihe na-emekarị ka ọ bụrụ na ị na-enwe mmekọahụ na nwoke, ọ bụ naanị na e nwere nsogbu na ụlọ ere. Ị nwere ike idozi nsogbu ahụ ngwa ngwa: http://www.aasraw.com/contact/
Kedu ihe bụ yohimbine na otu esi arụ ya?	Cialis: Otu esi eji ya na oge ole ọ na-aga